Vision of SECM “Towards dynamic and regulated Myanmar Securities market, developing together with the world’s. "Mission of SECM“To maintain fair, secured, liquid securities market, protecting the investors and raising the national economy ”
The office of the Securities and Exchange Commission was opened on 24 February 2015 and endeavored to open the first-ever Yangon Stock Exchange in Myanmar.
Although the Yangon Stock Exchange was successfully opened on 9th December 2015, the First Myanmar Investment Public Co., Ltd (FMI) could start shares trading on 25th March 2016 over two months of opening Yangon Stock Exchange.The second listed shares trading of Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd (MTSH) was started on 20th May 2016 and the third listed shares trading of Myanmar Citizens Bank Ltd. (MCB) was started on 26th August 2016 , the fourth listed shares trading of First Private Bank Ltd (FPB) was started on 20th January 2017
၃၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအရင်းအနှီးဈေးကွက်ဥက္ကဌများအစည်းအဝေး (36th Chairs’ Meeting of the ASEAN Capital Markets Forum) ကို ယနေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၃၀) နာရီတွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး၊ ညွှန်ကြးရေးမှူးချုပ် ဦးကြည်ဇင်ထွန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများဖြစ်ကြ သည့် ဒေါ်ကြည်ကြည်ခင်ဆွေ နှင့် ဦးဆန်းဝင်း တို့ပါဝင်သည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၃-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “ဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၂) သို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာထမ်း/အမှုထမ်း (၁၂) ဦးနှင့် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၁၈) ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Previous Update News
ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၁၆)နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၅)နေရာ တို့အတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်း အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး နေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက် ကြေညာခြင်း
Notification on Requirement for Effective Corporate Governance